Dhageyso: Mid ka mid ah wasiiradii uu magacaabay Waare oo sabab la yaab leh isku casilay - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Mid ka mid ah wasiiradii uu magacaabay Waare oo sabab la...
Dhageyso: Mid ka mid ah wasiiradii uu magacaabay Waare oo sabab la yaab leh isku casilay
Jowhar (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. ayaa Saacado ka hor ku dhawaaqay Golaha Wasiirada Maamulkiisa, waxaana durba is casilay mid kamid ah Wasiirada uu magacaabay.
Waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu is casilay Wasiiru-Dowlahii Wasaarada Boostada iyo Isgaarsiinta.
Ismaaciil Maxamed Culusow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu xilkaas iska casilay isagoo ku sheegay sababta uu isku casilay inay tahay iyadoo aan markii horeba lagala tashan xilka loo magacaabay.
Waa Wasiirkii ugu horeeyay ee iska casilay golaha wasiirada hir-Shabeelle ee uu Maanta Magacaabay Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare.
Haddaba halkaan hoose ka dhageyso codkiisa: